बामदेवका लागि उप निर्वाचन भए, दोलखा र झापा–५ अनुकुल - नयाँपुल अनलाइन डटकम
प्रकाशित मिति : Thursday, April 30, 2020 nayapulonline
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी सकिएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा अघि सारेपछि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल भित्र र बाहिर यस विषयमा विभिन्न कोणबाट चर्चा र बहसहरु भईरहेका छन् । यस विषयको ठोस खाका वैशाख २० आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
वास्तवमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै चाहेको हो भने संविधान संशोधन गर्नु भन्दा कुनै क्षेत्र खाली गराएर बामदेवलाई निर्वाचन लडाउने विकल्प नेकपाका लागि उपर्युक्त हुने अडकलबाजीहरु पनि चलिरहेका छन् ।
कास्की क्षेत्र नं. १ निर्वाचित सांसद खगराज अधिकारीले त बामदेवको लागि आफूले राजीनामा दिने समेत घोषणा गरिसकेका छन् । गत निर्वाचनमा अधिकारीले ३९ हजार २४२ मतका साथ कांग्रेसका यज्ञ बहादुर थापालाई १४ हजार मतान्तरले हराएका थिए । पछिल्लो समयमा नेकपाको अवस्था त्यति राम्रो नभएकोले कास्की भन्दा धेरै मतान्तर भएको दोलखा र झापा–५, बामदेवको लागि धेरै हदसम्म अनुकुल हुने चर्चाहरु पनि हुन थालेका छन् ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५७ हजार १ सय ३९ मत ल्याउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा क्षेत्र नं.५बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी डा. खगेन्द्र अधिकारीले २८ हजार २ सय ५७ मत ल्याएका थिए । यो देशभर मै प्राप्त भएको सबै भन्दा धेरै मत थियो । यहाँको मतान्तर २८ हजार ८ सय ८२ रह्यो ।
त्यस्तै, दोलखामा पनि वर्तमान सरकारका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ ५५ हजार ९ सय ५४ मतका साथ विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रुद्रबहादुर खड्काले २५ हजार ८०१ मत पाएका थिए । यहाँको मतान्तर ३० हजार १ सय ५३ छ जुन मुलुककै सबै भन्दा धेरै मतान्तर पनि हो ।
नेकपाका एक नेताले केहि दिन अगाडि सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्रीले त्याग नै देखाउनु खोज्नुभएको हो भने झापाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर भए पनि वामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन पनि सक्नुहोला भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । यदि, त्यसो नभएमा बामदेवको लागि अर्को सुरक्षित स्थान दोलखा हो भन्ने चर्चा पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रकट भएको देखिन्छ ।
बामदेवको बालुवाटार यात्रा जुर्ला त ? कि प्रधानमन्त्रीको रणनितिक कार्ड मात्र हो ? अनि बामदेवका लागि खाली होला त झापा र दोलखाको सिट ? यी प्रश्नहरुको उत्तर २० गतेको सचिवालय बैठकबाट धेरथोर पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।